अशुद्धमा एर्षेष 2021 मा समुद्री किनारमा विक्रेताहरू बिना।
Apushta मा आवास कसरी छनौट गर्न?
Asushta मा छुट्टी खर्च गर्न को कारण:
Apshta एक अद्भुत मौसम रिसोर्ट हो। दक्षिणी सूर्य, ताजा हावा, कोमल समुद्री, हिमाली परिदृश्यहरूको प्रशस्तता उत्तम छुट्टीको कम्पोनेन्टहरू हुन्।
मौन र idyll। छुट्टीमा ठूला सेभरको बावजुद, एल्स्ट्ट्ठामा शान्त ठाउँ पत्ता लगाउन र गडबडीको सपना देखाउन सजिलो छ। प्रोफेसस्पेरियर कुना र सुरम्य सडकहरूले साँचो शान्ति दिनेछ।
सफल भौगोलिक स्थिति। Alushta Yallta र 47 47 बाट सिमफोपोलबाट 35 35 किलोमिटर अवस्थित छ - यो कुनै पनि प्रकारको यातायात द्वारा प्राप्त गर्न सुविधाजनक छ।
जिल्लामा धेरै संख्याको आकर्षणहरू। छुट्टीमा एक ठूलो छापले भूतहरूको उपत्यकामा भ्रमणहरू उत्पादन गर्दछ। धेरै पर्यटकहरू यहाँका लागि जान्छन्। 20 किलोमिटर डीशा चेचवभको साथ गुरजुफ हो, तौल रिकोली र सुन्दर एडल। Palay 35 किलोमिटर - Pallas र पार्क संग यलोना।
खेल गतिविधि। वार्षिक सुपरटोक्रोक्रक्रस च्याम्पियनशिप एल्चामा छ ("रैली एल्सल") र एल्यूश्क कप साइक्लिंग रेसि of को एक श्रृंखला। त्यहाँ सबै-रूसी खेलकुदका खेलकुदहरू रिकलरिंग प्रतियोगिताहरू छन् (क्रिश्नलियाको कथा ")। तपाईं एल्सीट्टामा बाहिरी क्रियाकलापहरूको लागि खेलको लागि यात्राको साथ मिल्नुहुनेछ।
कसरी छुट्टीको लागि Asushta मा आवास कसरी फेला पार्ने?
एल्स्ट्ता क्रिस्टिनाको दक्षिणी तटरमा सानो रिसोर्ट शहर हो। एक लोकप्रिय छुट्टी गन्तव्य, जसले प्रत्येक वर्ष ठूलो पर्यटकहरूको ठूलो संख्या आकर्षित गर्दछ। Apushta मा छुट्टी यसको मौलिकता र संतृप्ति द्वारा सम्झना छ। कम्प्याक्ट मोस्टल लेआउटले एक विशेष सान्त्वना दिन्छ। मुख्य तटबन्धको आवाज आम्दाइल र प्रोफेसशियल कुनामा प्रतिस्थापन गरिन्छ। केन्द्रीय बजारबाट, तपाईं डेमामजीमा प्रेतहरूको उपत्यकामा जान सक्नुहुन्छ र यी ठाउँहरूको रहस्यय पदार्थ मुडलाई अवशोषित गर्नुहुन्छ। एक पैदल पछि, प्रलोभन नजिकै fudchuर्ट मा स्थानीय रौलांग स्वाद।
Alushta समुद्री किनार र माउन्टेन माडफाई बीच धेरै कम्प्याक्ट गरिएको छ। एल्सीमा निजी क्षेत्रको तटबन्धमा सुरु हुन्छ र माउन्टेजीजीको फेदमा विस्तार हुन्छ। पहिलो र दोस्रो लाइनमा त्यहाँ होटलहरू र अतिथि घरहरू छन्, तर समुद्र तटबाट 50000 मिटरहरूको दूरीमा, व्यक्तिगत भवनहरू सुरू हुन्छन्। सहरमा भाडा आवासको माग उच्च छ, तर एल्स्ट्तामा बाँकीको मूल्य यल्टा भन्दा कम छ। प्रत्येक दोस्रो घरमा त्यहाँ एउटा कोठा छ। स्थानीयहरू उत्सुकताका साथ ट्रेड छन् - समुद्रले राम्रो विकल्प पत्ता लगाउन र एल्स्मेडियाविना एल्स्मेडियामा अंतरालमा राम्रो विकल्प पत्ता लगाउन सजिलो छ।
परियोजना "Mincrt। तपाइँ "असन्तुक्षहरूविना एल्टिट्ठामा आराम गर्नको लागि उपयुक्त आवास छनौट गर्न प्रदान गर्दछ। साइट 1000000 घर मालिकहरू र सुविधाजनक फिल्टरिंग प्रणालीबाट प्रस्तावहरू - आवासको लागि उत्तम विकल्प खोज्न सजिलो छ। 2021 सुविधाजनक र लाभदायक र लाभदायकमा एल्स्ट्तामा आवास हटाउनुहोस्!
केन्द्रीय - शहर प्रतीकमा सुरू हुन्छ, प्रसिद्ध रोबंडु। शेयर तट इन्फ्रास्ट्रक्चर (चैश लुलाहरू, छाता, स्ट्रिलफोक, आकर्षणहरू) मा)। भीडभाड किनार पर्याप्त शान्त छ। तपाईं साना बच्चाहरु संग सावधान हुनु पर्छ।
<< p> बच्चाहरू - ऊ शाही हो। धातुको पूर्व किनार विभागहरूको राज्यको राज्य। बच्चाहरूको साथ आदर्शको लागि आदर्श। पानी, गहिरो समुद्रको लागि बलियो वहन। नजिकैको एक सुन्दर पार्क हो जुन XIX शताब्दीको अन्त्यमा टुक्रिएको थियो।
peholy प्रोफेसरशियल कुनामाझैं शहरको पश्चिमी भागमा आरामदायी र शान्त क्षेत्र हो। लम्बाई - km किलोमिटर। समुद्र तट ढुb्गाले ढाकिएको छ, जुन शेल बालुवासँग मिसाइएको छ। कडा वंश। पानी जहिले पनि पारदर्शी र सफा हुन्छ। तपाईं एक तटबन्ध वा सार्वजनिक यातायात द्वारा तटबन्धन वा ब्रेक संग पैदल हिंड्न सक्नुहुन्छ।
निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्र र होटेलका विकल्पहरू निजी क्षेत्र र होटेलका विकल्पहरू छन् निजी क्षेत्रका विकल्पहरू 2021 फोटोहरू र समीक्षा
< निजी क्षेत्रलाई "लिम्डुमिला" समुद्रको माध्यमबाट पार्क मार्फत सिधा रेखा र रिसोर्टको तटबन्धको एक सीधा रेखाको गाउँमा अवस्थित छ। नजिकै -00 मिटर त्यहाँ बजार छ, साथै नजिकैको किराहारी पसलमा, फार्मेसी, स्टप, मनोरन्जन केन्द्र। निजी क्षेत्र "लिडोमिला" मा।
मिनी-होटल "सपना" लेनमा अशुद्धको केन्द्रमा अवस्थित छ। कालेबिना, 1, जहाँबाट minutes मिनेटमा तटबन्ध र एक ढुb्गा समुद्री तटमा हिंड्दै। पैदल दूरीमा, सबै विकसित रिसोर्ट पूर्वाधारहरू। अतिथिहरूले आवासको लागि आरामदायक कोठा तयार गरेका छन्।
<< p> कहाँ निजी क्षेत्र मा सस्तोमा रहन वा समुद्रको नजिक एक राम्रो होटल छनौट? मालिकहरूबाट राम्रो आवासलाई विचार गर्नुहोस् र एल्सीतोमा उत्तम होटेलहरूको छनौट बनाउनुहोस्, जुन सम्पूर्ण परिवार र बच्चाहरूको साथ मनोरन्जनका लागि उपयुक्त छ। हामी मूल्यहरू र कसरी अपार्टमेन्टहरूको खोजी गर्दा बचाउने मूल्यहरू सिक्छौं।
क्रानीमा सस्तो आवासलाई र यी प्रणालीहरू प्रयोग गरेर सेवा बकिंग र रोमलगबाट हेर्न सिफारिस गरिन्छ, हामी निरन्तर लाभदायक पट्टा कहिँ पनि फेला पार्दछौं।
बुकटिंग प्रणाली साधारण प्रणाली। उपयुक्त आवास विकल्प खोज्नको लागि तपाईले साइटमा जानु पर्छ, बाँया कुनामा त्यहाँ खोजी बाकस हुनेछ। स्तम्भ "स्थानमा, नाम" तपाईले शहर वा क्षेत्र बनाउनु पर्छ। केवल तल, आगमन र प्रस्थानको मिति निर्दिष्ट गर्नुहोस्। मान्छे को संख्या कम र बच्चा यात्रा हुनेछ कि छैन। उही स्तम्भमा, कोठा वा अपार्टमेन्टहरूको संख्या निर्दिष्ट गर्नुहोस्। अर्को क्लिक गर्नुहोस् "चेक मूल्य" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रणाली स्वचालित रूपमा सबै नि: शुल्क र उपयुक्त विकल्पहरू चयन गर्दछ। मूर्तिपूजमा, तपाईंले "हाम्रो उपलब्ध नम्बरहरू हेर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्न आवश्यक छ। विन्डोले खोल्ने स्थितिले फोटोसहित होटल / अपार्टमेन्टहरूको विस्तृत विवरण देखा पर्यो, सेवाहरू, मूल्यहरू र अपार्टमेन्टहरू (यदि यो घर हो भने)।
कोठाको वर्णनको विपरीत कुनामा दायाँ कुनामा, तपाईंले नम्बर चयन गर्नु पर्छ र माथि दायाँ कुनामा "बुक" बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। अर्को, जस्तो देखिन्छ, "देखाइन्छ, तपाईंले ईमेल ठेगाना र पाहुनाहरूको परिचय भर्नु पर्छ। बुकिंग यसमा पुष्टि हुनेछ।